NDI ABIA NA IMO NA-EWELIRI UGWUANYỊ AKA – hoo!haa!!
NDI ABIA NA IMO NA-EWELIRI UGWUANYỊ AKA
Ụmụ afọ steeti Abia na Imo bi n’Enugu kpọrọ onwe ha “Abia/Imo People’s Forum” ekwuela hoohaa, na ha chọrọ ka aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị chịrị steeti Enugwu gawa n’ihu. Ha sịrị na nke a bụ maka na Ugwuanyị nwere ọchịchị bụ ịgba nke mere ka udo na-achị n’akụkụ niile nke steeti Enugwu.
Onye isi oche ndi otu a bụ Apọsụl Dọkinta Josef Ajụjụngwa nakwa nna ya bụ otu bụ Bishọp Dọkịnta Gọdwin Mmadụ nke ‘Pentecostal Fellowship of Nigeria’, PFN, kwukwara na ha na-akwado atụmatụ dị iche iche Ugwuanyị ji maka ikwalite ọdị mma ndi bi na steeti Enugwu.
Ụmụ Abịa na Imo a kwuru na Ugwuanyị bụ enyi ndi ọ na-achị ma bụrụkwa onye na-agbasi mbọ ike maka ịhụ na nchekwa ndụ na akụ na ụba ụmụ mmadụ dị ka o kwesịrị ịdị.
Mgbe ọ na-ekwu okwu n’ọgbakọ ukwu ekpokọbara maka ịgwa Ugwuanyị gaa n’ihu n’afọ puku abụọ na iri na itoolu, onye isi oche ndi otu a bụ Dọkịnta Ajụjụngwa kwuru hoohaa, na isi ahụrụ kwaba okpu n’ọgbakọ ahụ bụ nanị maka ikwado ka ahọpụtakwa Ugwuanyị na ntuli aka nka afọ puku abụọ na itoolu na-abịa abịa.
Ha sịrị na ọgbakọ a ha kpokọbara bụ ụdịṅ ya nke mbụ na steeti Enugwu n’ihi na nke a bụ izizi ndi ọgọ aka na-achị steeti a na-ebinye aka, ka ọgọ ha bụ aka na-achị yabụ steeti chịa ya nke ugboro abụọ.
N’okwu ha ” anyị na-ekele onye ọchịchị a maka ụdị nchekwa dị na steeti a, ọdịghị anyị ịtụ n’anya na steeti Enugwu bụ otu n’ime steeti kachaa nwee udo n’ala anyị”
Ha kwukwara na-abịa n’Enugwu, ma onye ukwu ma onye nta na-alaba ụra ma mụchite anya ya abụọ kumie ụra ekumi ka o si kwesị ekwesị.
Previous Post: MGBANWE PỤRỤ IMALITE N’EBE Ị NỌ
Next Post: Akụkọ ifo: Ihe mere Nwaanyị anaghị arị elu